Ukuqashwa kweholide "Trapelot" abantu abangu-7 eduze ne-Saint Emilion - I-Airbnb
Ukuqashwa kweholide "Trapelot" abantu abangu-7 eduze ne-Saint Emilion
Naujan-et-Postiac, Nouvelle-Aquitaine, i-France
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Karine
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Karine izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Itholakala ekhoneni elithulile lasemaphandleni, egqumeni eliphakathi nezivini ze-Entre 2 Mers, elingekho kude ne-Saint Emilion, amakhilomitha angu-35 ukusuka edolobheni lase-Bordeaux, amakhilomitha angu-8 ukusuka e-Sainte Terre, idolobhana elincane elisogwini lwe-Dordogne elaziwa nge-lamproie yalo e-Bordelaise kanye nama-eels ayo, amakhilomitha angu-5 ukusuka ku-Faleyras coach circuit, amakhilomitha angu-15 ukusuka "ku-Castillon" bonisa okwenzeka ehlobo ngalinye, ihora eliyi-1 uhamba ngemoto ukusuka e-Bassin d 'Arcachon. Umzila wamabhayisikili oseduze nendlwana nemizila eminingi yokuqwala izintaba.
Ngaphezu kwakho konke, yindlwana emaphandleni lapho ukuzola kubusa khona! Konke kwenziwa ukwenza imindeni izizwe ikhululekile ngemidlalo etholakalayo yabantu abasebancane nabadala ! Indawo engu-2000 m2 eyenziwe ngamapulangwe futhi ebiyelwe ngokuphelele izovumela izingane ukuba zigijime! Ithala elinefenisha yengadi nendawo yokosa inyama futhi olahlwayo kusihlwa esihle sasehlobo!
Emibhedeni enamakamelo okulala angu-2 anemibhede engu-140 kuhlanganise negumbi lokugezela elineshawa nosinki kanye nekamelo lokulala elilodwa eline-mezzanine kuhlanganise nombhede ongu-90 kanti engxenyeni engezansi yemibhede engu-2 engu-90 nombhede wengane, ungakhulumi ngemidlalo eminingi etholakalayo !
Kukhona igumbi elikhulu lokuphumula elinekhishi, igumbi lokudlela, igumbi lokuphumula nendawo yezingane abazoyijabulela nakanjani. Izindlu zangasese ezingu-2 kanye negumbi lokugezela elingu-1 elinobhavu. Amalineni angaqashiswa (amashidi, amathawula, amathawula ezitsha), ahlomele ingane (umbhede, isihlalo, ubhavu, ibhodlela elifudumele, umatalasi oshintshayo, isihlalo sokudonsa, i-bib, i-stroller) ayatholakala kuwe mahhala. Kufana nepharadesi lezingane elinemidlalo eminingi ekhona! Kubagibeli bamabhayisekili noma abagibeli bezintaba ungagcina imishini yabo egalaji. Ngitusa le ndlwana kubantu abadinga izinto eziluhlaza nokuzola abafuna ukuvakashela isifunda sethu esihle! Ngaphandle kokukhuluma ungazama imikhiqizo emihle yesifunda nxazonke ! Kwanele ukushiya unempilo !
I-Naujan ne-Postiac yidolobhana elincane elinesitolo sendawo nesitolo sokudla, ihhovisi lokuposa, indawo yokudlela, i-bar. Kumasipala uzothola futhi umtapo wemidiya, indawo yokudlala yezingane. Idolobhana elithule kakhulu nelinethezekile elenziwe ngamatshe amadala!
Nakanjani ngihlala ngedwa phakathi nokuhlala kwakho, ngokwami ngihlala edolobhaneni elincane eliseduze nawe.
Hlola ezinye izinketho ezise- Naujan-et-Postiac namaphethelo